Trade Show Booth Design - Echefula ihe ndị a dị mkpa
Tuesday, May 31, 2016 Satọde, Febụwarị 13, 2021 Douglas Karr
Ọ bụ ezie na anyị na-elekwasị anya na atụmatụ dị iche iche maka ndị ahịa anyị, anyị na-agba ha ume mgbe niile ịga nzukọ ogbako na ngosipụta azụmahịa. Ihe ngosi ahia nwere mmetuta di egwu na iwulite mmata nke ika gi ya na ndi na - ege gi nti bu ihe kwesiri ka ichoputa ihe ha choro karia ndi mmadu biara na saiti gi. N'ezie, 81% nke ndị na-ere ahịa na-azụ ahịa nwere ikike ịzụ ihe na 99% nke ndị ahịa hụrụ uru ịnọ ebe ahụ
Ihe ngosi ahia na ihe ngosi bara ezigbo uru maka azụmahịa ọ bụla, ebe ha na-enye ohere ohere nkwukọrịta ihu na ịkparịta ụka n',ntanet, nke ọtụtụ azụmahịa na-ejighị ya egwu ụbọchị ndị a. Ma ọ na-agwa ndị ahịa dị ugbu a okwu, na-akwalite ọrụ gị na atụmanya ọhụụ ma ọ bụ na-egosi akara gị na ndị ọnụ ọgụgụ gị na ụlọ ọrụ gị, ihe ngosi ahia bara oke uru maka azụmaahịa ma ekwesighi ileghara ya anya. Onyekwere
Anyị gị n'ụlọnga emeela ụlọ ahịa ihe ngosi maka ndị ahịa ole na ole. Ndị na-arụzi ọrụ ụlọ ọrụ ahụ dị mfe. Ndị na-enye booth na-enwekarị faịlụ imepụta iji nyefee onye na-ese gị maka ịmegharị ndebiri. Agbanyeghị, ịhazi maka mmetụta kachasị chọrọ chọrọ ụfọdụ ikike. Lee ihe 8 dị na Losberger achọtala maka imepụta ụlọ ahịa ngosi dị irè:
ige nti - ngosipụta mkpa ka etinye itinye aka na-agafe ọbịa n'ime 3 sekọnd.
Industry - kwesiri ikwekọ na ụlọ ntu ụlọ ọrụ ndị ọzọ mgbe ị ka kwụpụrụ.
Tule - ederede ederede dị iche iche dị mkpa iji mee ka anya si n'ebe dị anya dị mfe.
agba - jiri agba ndị na-akpali omume na ị na-achọ ndị bịara ahịa ihe ngosi ahia.
Space - ọkọlọtọ gị, ntanye ihu, yana njigide nke ọma na n'ihu ọha kama ị na -ejuputa ọtụtụ ozi achọpụtara.
mbọn - kwesiri ịdị na-agbanwe agbanwe gafee akara gị, njigide, yana websaịtị.
Graphics - aghaghi ibu ihe di nfe ma huru anya site n ’uzo di anya ichota nlezianya site na izipu ozi.
Akara ókwú - kwesịrị ibu nnukwu, dị mfe ọgụgụ, ma tụọ ọdịiche dị iche na agba dị n’azụ.
M ga-agbakwunye otu ndụmọdụ ọzọ… chọpụta ókè ị ga-esi nwee nnọkọ ogbako ma jiri ohere n'elu ụlọ ndò gị. Otutu ebe ogbako na-ekwe ka itinye akara nke ìhè nke ụdị ụfọdụ - nke nwere ike ịbụ nnukwu uru na nnukwu ụlọ nzukọ. Ihe omuma nke Losberger, Ihe mere eji egosi ahia dị mkpa maka azụmaahịa gị, na-agụnye ụkpụrụ dị na UK, usoro nchekwa, ụdị ụlọikwuu ihe omume na ụlọ ntu, uru maka owuwu oge, na ndụmọdụ nkwadebe ndị ọzọ!
Tags: booth imeweogbako ụlọ ndozionye nkwusatent nhaziihe ngosi ahiaụlọ ahịa ihe ngosi ahiaahia show ụlọ ndò imeweahia show booth ụkpụrụahia show ụlọ ntu Atụmatụahia show akwaahia show tent imewe
Jun 18, 2016 na 11:54 AM
Ihe ndị a bụ ezigbo ndụmọdụ. Wantchọrọ ịdọta ndị mmadụ n'ụlọ ntu gị, mana ịkwesịrị ịtụle mmachi ọ bụla nke nzukọ ọgbakọ ma hụ na ị na-arapara na akara. Daalụ maka ịkekọrịta.